“आकाश सँग बिहे गर भन्नेलाई पुजाको क‘डा जवाफ!:: Mero Desh
Published on: २६ आश्विन २०७८, मंगलवार ०६:२२
काठमाडौं । अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको प्रेम र ब्रेकअप चर्चा अझै रोकिएको छ । आकाश र पूजा दुवैले हामी प्रेममा थिएनौँ’भनेर बारम्बार स्पष्टिकरण दिँदा पनि ‘तपाईँ हरुको ब्रेकअप भएको हो ?’भन्ने प्रश्नले उनीहरुको पिछा छोडे
को छैन । किन टाढिएको ? भन्दै फ्यादेखि साथीभाइ, सञ्चार कर्मी सम्मले उनीहरुलाई सोध्ने गर्छन् हिजो पनि एक कार्यक्रम मा पुगेका आकाश–पूजा यस्तै प्रश्नले घेरिए ।र सुरुमा नै एउटा पत्रकारले प्रश्न सोधे तपाईँहरुको केही फ्यानहरुको समूह बाट
एक जना डि”प्रेशनमा हुनुहुन्छ, धेरै समयदेखि । एक जनाले त सुसाइड प्र”यास गर्नुभएको छ यो दुई–तीन महिना यता तपाईँह रुको सम्बन्धमा आएको दरारको कारणले यस्तो कदम चालेको भनिएको छ आकाश र पूजा प्रेमि–प्रेमिका हो कि होइन ? कुरा
खुलस्त पार्न उहाँहरुले अनुरोध गर्नुभएको छ । हामी डिप्रेशनमा गइसक्यौँ भन्नुभएको छ । के तपाईँहरु साथीमात्रै हो ति लामो प्रश्नको जवाफ दिँदै पूजाले भनिन्, रामकहानीबाट हाम्रो मित्रता सुरु भएको हो । अझै पनि हामी मिल्ने साथी नै हौँ । हामी सँगै
नै छौँ तर बिहे र प्रेमकै कुरा गर्ने हो भने, कतिबेला कोसँग कस को बिवाह हुन्छ थाहा हुँदैन । सबै कुराको सही समय आउनुपर्छ । प्लिज, माया गर्नुहुन्छ थाहा छ । तर आफू लाई “हानी पुर्याउने काम केही नगरिदिनुहोला । किन भने तपाईँहरु लाई केही भयो
भने हामीलाई पनि चि‘त्त दुख्छ बि’वाह प्रेम नभए पनि आकाश र पूजा सधैँ सँगै हुनेछ कार्यक्रममा ‘युद्ध बानियाँसँगको सम्बन्ध के हो ?’ भन्ने पनि प्रश्न गरेका थिए ।पुजाले भनेकी छिन्, ‘त्यो
नाम जो’डिदिने मान्छेलाई नै थाहा होला ।जुन दिन मेरो बिहेको कार्ड आउँछ, त्यो दिन हो सम्बन्ध खुलाउने भनेको अहिले मेरो नाम कसैसँग पनि नजोडिदिनुस् । उनले प्र’स्ट भनेकी छन् मन लाग्दो गरि नाम नजोडिदिन पनि नायिका पुजाले आ’ग्रह गरेकी छन।”